यो पोर्टेबल ब्लेन्डर बोतलको वरिपरि जेट गर्ने समय हो - उपकरणहरू
यो पोर्टेबल ब्लेन्डर बोतलको वरिपरि जेट गर्ने समय हो
It S Time Jet Around With This Portable Blender Bottle
आफ्नो हात उठाउनुहोस् यदि तपाईं प्राय: बिहानको रस खान बिर्सनुभयो वा काममा जानुभन्दा अघि हिलाउनुहोस्। अब तपाईको हात उठाउनुहोस् यदि तपाईसँग एक भारी र थकाउने कसरत पछि प्रोटीन शेक मिश्रण गर्न ऊर्जा छैन। के हुन्छ यदि म तपाईंलाई भन्छु कि त्यहाँ एक उपकरण छ जुन तपाईंको मोरोटोनस ब्लेन्डिंग रुटलाई द्रुत गतिमा ट्र्याक गर्दछ? मलाई तपाइँलाई 'ब्लेन्डजेट' इलेक्ट्रिक पोर्टेबल बोतल परिचय गराउन दिनुहोस्। तपाईले सोचिरहनुपर्दछ कि यस बोतलको बारेमा के महान हुन सक्छ। के यो केवल सामान्य बोतल मात्र होइन? मलाई विश्वास गर्नुहोस्, यो सामान्य भन्दा टाढा छ। त्यसोभए यो उपकरण वास्तवमा के हो?
धेरै अनुसन्धान र विकास ब्लेन्डजेट, नयाँ टेक्नोलोजीको उत्पादनमा गएको छ जुन तपाईंलाई जहाँसुकै र जुनसुकै ठाउँमा ताजा जुस, स्मूदी वा पेय पदार्थहरू बनाउन दिन्छ। अब तपाईंलाई थाहा छ कि किन यस उपकरणले हेडलाइटहरू बनाइरहेको छ।
ब्लेन्डजेटका केही सुविधाहरूमा एक नजर राख् ...
१. आसपास जेट गर्नको लागि उत्तम
हो, यो उपकरण पोर्टेबल छ, त्यसैले तपाईं यसलाई जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ बोक्न सक्नुहुनेछ। यो हल्का वजन र टिकाऊ हो। तपाईं यसलाई आफ्नो झोलामा बोक्न सक्नुहुन्छ र सिधा बोतलबाट पिउन सक्नुहुन्छ जब तपाईं चाहानुहुन्छ।
२. यो शक्तिशाली छ
यो बरफ, स्थिर फल वा पातदार साग, यसको पेटन्टेड टर्बोजेट टेक्नोलोजीले २० सेकेन्डमा केहि पनि मिश्रण गर्न सक्छ।
छवि: @ shutterstock
It's. यो USB रिचार्जेबल हो
चार्ज पछि, यो उपकरण १ 15 भन्दा बढी मिश्रणहरूको लागि रहन्छ। यो एक पानी प्रतिरोधी USB-C चार्ज पोर्ट र एक उल्टो केबलको साथ आउँदछ, तपाईंलाई कुनै पनि स्थान र समयमा यसलाई चार्ज गर्न दिँदै।
R. कुल्ला र जानु तयार छ
यसलाई सफा गर्न तपाईसँग मिश्रण मात्र छ। बोतलमा पानी र साबुनको मिश्रण ब्लेन्ड गर्नुहोस्, र तपाईं जान तयार हुनुहुन्छ।
अब खेल परिवर्तन गर्ने भागको बारेमा कुरा गरौं, अर्थात लागत। सामान्यतया, ब्लेन्डजेटको मूल्य ,000००० हो। यो वास्तवमै ठूलो लगानी साबित हुन सक्छ, र यसको लाभहरू वास्तवमै लागत भन्दा बढी छ। त्यसोभए, तपाइँ आफ्नो ब्लेन्डजेटको साथ वरिपरि जेट लिन तयार हुनुहुन्छ?
यो पनि पढ्नुहोस्: भित्तामा ऐना मिरर, के RIKI SKINNY सबै पछि क्रान्ति हुनेछ?
स्थायी रूपमा अनुहारमा कपाल कसरी हटाउने
घरमा प्राकृतिक रूपमा कपालमा रूसी कसरी कम गर्ने
लामो कपाल विकासको लागि घरेलू उपचार छिटो
कपाल झर्नेबाट बच्ने उपायहरू
अनुहारमा बेकिंग सोडा लागू गर्दै
योग आसन नाम र लाभहरू
कपाल विकास घरेलू उपचार को लागी